Gịnị bụ AuthorRank na ihe kpatara ya | Martech Zone
Anọ m na-azụ ndị ahịa m ma anyị abụrụla ijikọ koodu edemede na saịtị WordPress anyị niile ebe anyị hụrụ utịp dị ịtụnanya nke na-eme ya na blọgụ nke anyị. A bụ ihe a nnukwu infographic aka iji kwalite edemede ọbụna n'ihu… penning okwu, Onye edemedeRank.
Maka onye edemede, onye na-ere ahịa ma ọ bụ onye na-emepụta ọdịnaya, AuthorRank na-enye ohere dị ukwuu maka akara aka nke onwe, mana na-emekwa ka anyị n'otu n'otu na-ahụ maka ọrụ anyị na-arụ. Inyocha ogo nke ọdịnaya bụ ọrụ Google, na ịga n'ihu n'ọdịnihu Google doro anya na-achọ inyocha ogo ndị edemede. Site na ịghọta edemedeRank ugbu a, ndị ode akwụkwọ nwere ike iguzobe onwe ha yana ọrụ jikọtara ha dị ka ndị tozuru oke. Infographic nke BlueGrass.
Oghere ọcha dị jụụ na Infographic bụ maka vidiyo na-esonụ:
Tags: odeeedemede njikọonye edemedeonye edemedebluegrassahia bluegrassakwụkwọrel edemedeagwo
Feb 21, 2012 na 6:51 PM
M nwere mmasị ịmata otú rel = ”edemede” nwere ike tinye n'ọrụ maka azụmahịa.
Feb 21, 2012 na 6:55 PM
Ndewo @carrinli: disqus! Site na igosipụta ndị ode akwụkwọ azụmahịa, azụmaahịa gị nwere ike iwulite ikike. Pịa site na ọnụego na ederede ntinye ederede achọpụtara ga-adị elu karịa na ha hụrụ na ọ bụghị bot ma ọ bụ saịtị spam, yabụ ị ga-adọta ọtụtụ ndị ọbịa site na engines ọchụchọ. Anyị ahụla ọkwa dị mma na ọnụ ọgụgụ nke folks na ịpị site na blọọgụ anyị site na engines ọchụchọ ebe anyị nakweere njikọ ndị edemede.
Jeanette Cates kwuru
Yabụ na amaghị m nke ọma - anyị enwere ike iji infographic na weebụsaịtị anyị wee tinye vidiyo ahụ - ma ọ bụ gịnị bụ ebumnuche gị? Ezigbo mma, BTW - na n'ezie isiokwu dị ọkụ.
Infographics ezubere ịkekọrịta, Jeanette! Nke a mepụtara site na BlueGrass… ndị na-ahụ n'anya na-ekerịta ha… ọ bụrụhaala na ị nwere ọmarịcha ekele gị na njikọ kwekọrọ na saịtị ha!